बहुमूल्य पत्थरबाट आभूषण
फैशन सहायक उपकरणहरू
पुराना दिनहरूमा कीमती पत्थरों देखि बने गहने राजाहरु, सामन्त प्रभुहरु र महानगरहरु को विलासिता को एक तत्व थियो। आज उनीहरूको पहुँचको सीमामा विस्तारै विस्तार भएको छ, केवल हीरा सेक्सको प्रेम असामान्य बनिरहेको छ र हीरा झुण्ड, पन्ना हार र विभिन्न रत्न संग रिंगहरु।
ढुङ्गा र सुनको गहना
प्राकृतिक पत्थरों को लागि पारंपरिक "फ्रेम" हो, प्राकृतिक धातु हो, जो चांदी र सुन हुन सक्छ। जब बालबालिका वा कंगनको अर्को जोडा छान्नुहोस्, यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो केसँग राम्रो छ के साथ छ र संयोजक हेर्न को लागी।
त्यसोभए, चाँदीका गहनाहरू संग ढुङ्गाहरू, पनीर, पनीर, पाखुरा, मोती हुन सक्दछ, मोतीले आँखामा आँखा र गोरा कपाल संग रोमांटिक केटीहरुसंग मेल खान्छ। ढुङ्गा र धातुको यस्तो संयोजनसँग किटको पातलो युवा व्यक्तिको आकर्षणलाई जोड दिनेछ।
हरू, रूबी, नीलमणि, हीरा जस्तै पत्थरहरू संग गहने सुनको गहनाको रूपमा - यो महत्वपूर्ण डिजाइन प्रदर्शन हो। तथ्य यो हो कि एक उत्कृष्ट हीरा रिंग हरेक दिन को लागि तपाईंको मनपर्ने सजावट हुनेछ, तर तिनीहरू संग लिपटे नीपरहरु लाई विशेष अवसरों को लागि स्पष्ट रूप देखि उपयुक्त छ। यसकारण, विशेष उत्पादन चयन गर्दा संख्यामा मापदण्डहरू विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
उपस्थितिका विशेषताहरू (आँखाको रङ);
यस विषयक विशेषता पत्थर को अनुकूलता र राशि को संकेत को रूप मा।
पत्थरहरू संग सुनको आभूषणमा फर्काउने, यो मूल्यको लायक छ कि ब्रलाटका आँखाले सुनको साथमा ठ्याक्कै वा अनुहार प्रयोग गर्ने निश्चित हुन्छ।
कसरी चाँदी र सुनको ढुवानीको साथमा जेठो कदर
कथित पत्थरों संग राम्रो तरिकाले आभूषण पहनने को बारे मा एक महत्वपूर्ण नियम, पहिलो - अनुपात को भावना, र दोश्रो, धातुहरु को एकरूपता। सबैभन्दा पहिला, सबै केङ्ग्स, कंगन र संग्रहमा उपलब्ध जंजीरहरू राख्नुहोस्, त्यस पछि देखि त्यहाँ कुनै स्वाद छैन। उदाहरणका लागि, सुनको गहनाको कीमती चित्रमा बहुमूल्य उपस्थितिको साथ अत्याधिक उपस्थिति खारेज गर्दछ र उनीहरूको प्राकृतिक सुन्दरतालाई सरल बनाउँछ। यसको अतिरिक्त, तपाईले एकै साथमा चाँदी र सुन नखोज्नु हुँदैन, दुईवटा आफ्नै सुन्दरमा, तर अलग हुनु "मनपर्छ"।
टुटको बैग - यो के हो, पसलबाट के फरक छ, के लगाउने?
महिलाको जाडो टोपी टोपी
बैग Cromia - सबै भन्दा फैशनेबल मोडेल को फोटोहरु को चयन र बैग Kromia संग स्टाइलिश तस्वीरहरुको चयन
कपाल रसिन रिबनहरूबाट बनाइएको
छाला कोरा गोलो गर्दन
महिला थलोहरू वास्तविक छाला बनेको छ
स्वारोवस्की को गहने
बेसबल क्याप्सन नयाँ युग
महिला गर्दन स्कार्फ
बच्चाहरु को लागि ब्रोंकिकम
बच्चाहरु मा लम्बिया को कसरि उपचार गर्ने?
निकोलस स्पार्कले जीवन र उनको उपन्यास पत्रिका हेलोको लागि एक फ्रान्सेली साक्षात्कार दिए!
तपाईंको विवाहलाई नष्ट गर्ने 10 तरिका
थिम जीव - रोपण र हेरविचार
आत्मा कसरी शैतान बेच्ने?
1 डिग्री को ग्रीवा डिस्प्लासिया
मानिसको साथ यौन सम्बन्धको किन सपना छ?
सबै अवसरका लागि रङ्गी सूत्रहरू
भाडादार तोता सँग एक बीक छ
रूसीहरूको लागि इन्डोनेसियामा भिसा
घर मा मार्साल्लोबाट मोचदार
वजन घटाने र शरीर सफा गर्ने जडीबुटी
Peritonitis - लक्षणहरू
ड्रीम कैचर - मूल्य
परीक्षाको लागि कसरी तयारी गर्ने?
द्वीपमा पर्व: क्रिस हेम्सवर्थले आफ्नो 34 औं जन्मदिन कसरी मनाए?
ओवनमा चिकन चोप्स